Amanqaku wokugcina engqondweni ukuba uza kuthenga ithebhulethi ye-Android | I-Androidsis
Ngaba ucinga kuthengela ithebhulethi ye-Android kungekudala?. Ukuba impendulo yakho iyavuma, unokuba nomdla kwinto endiza kukuxelela yona ngokulandelayo. Ukuza kuthi ga ngoku sibona ukuba uhlobo lwethebhulethi izixhobo kanjani ine-Android njengenkqubo yokusebenza, Kukho iindidi ezininzi zamaxabiso kunye nolona hlobo lukhulu ngakumbi kuhlobo lwezixhobo ezizibandakanyayo. Ewe, akukho namnye kuthi othanda ukuchitha imali, kodwa ukuthenga ngexabiso eliphantsi kunokuba kubiza ekugqibeleni kwaye ukuthengwa okubizayo kunokuba yinkcitho engenamsebenzi.
Ndiza kuzama ukucacisa iingongoma endizithatha njengezona zibalulekileyo ukujonga xa uzikisa ngokufuna umsebenzi kwithebhulethi. Ngokwam, ndicinga ukuba into yokuqala ekufuneka yenziwe ngaphambi kwayo nayiphi na into kukucinga nokubhala ephepheni usetyenziso endifuna ukulunika ithebhulethi kwaye isekwe kolo phando. Kungenzeka ukuba le nto ufuna ukuyenza ayinakwenziwa kwezi ntlobo zezixhobo kwaye ngokuqinisekileyo uya kusola i-Android okanye umenzi, xa isiphoso singekho ngaphezulu kweyakho.
Amanqaku okujonga ngokusisiseko ehla aye kubini, izixhobo zekhompyutha kunye nesoftware. Apha sele ndiyazi ukuba uyakucinga ukuba ndingumntu okrelekrele :), masiyibuyisele le nto kancinci. Ndiyaqonda ukuba xa sithenga ithebhulethi sithenga imveliso engenakuphinda ihlaziywe kwithuba elisondele kwiminyaka emibini okanye emithathu kwaye siyazi nokuba le nto siyithengayo ayizizo iingxowa zemibhobho kwaye banayo Ixabiso ekufuneka lijikeleze ii-netboooks.
Kukho iindidi ezininzi zamacwecwe abhengeziweyo kwaye nganye nganye inamacandelo ahlukeneyo. Amanqaku abaluleke kakhulu ukuba ajongeke ngokusuka kwimbono yam yinkqubo, iprosesa, i-RAM, isikrini kunye nebhetri, ezinye izinto ezinje ngamazibuko, i-GPS, iisenzi, njlnjl. amanqaku asisiseko xa ukhetha ithebhulethi kwaye apho sinokukhetha enye okanye enye imodeli.
Inkqubo: Inkqubo yentliziyo yesixhobo kwaye kwi-Smartphone kukho abavelisi abahlukeneyo kunye nesantya. Yonke into ibonisa ukuba INvidia Tegra 2 iya kuba ngumzekelo oqhelekileyo wokujonga. Isantya siya kuba malunga ne-1 ghz. Isamsung nayo iya kuyinyusa entsha Isiseko se-Orion ukuba ngokomgaqo kufanele ukuba unike umphumo omkhulu.
Ngaba singathenga ithebhulethi ngaphandle kweprosesa ngaphandle kwezi ntlobo? IArchos inyusa i-ARM Cortex A8 Ngaphandle kovavanyo, sibonile ukuba baziphatha kakuhle, kodwa singatsho ukuba ezi ziya kuba lolona luhlu luphakathi Iipilisi ze-Android. Yonke into engengombini ophambili kwimbono yam ayifanele kwaye ayifanele kuba ixabiso liya kufana kakhulu nalawo afaka isiseko esingumbini.
I-RAM: Eli candelo sisiqwenga solwazi andazi ukuba kutheni abavelisi bengaluniki njengoko besithi bane-Gps, okanye isivamvo sokukhanya okanye nayiphi na enye idatha, kunzima ukuyifumana phakathi kweenkcukacha kodwa kule Into icace gca, kokukhona kubangcono.
Isikrini: Ithebhulethi sisiphelo esiza kuyisebenzisa ngeminwe yethu kwaye ngqo kwiscreen, ke enye yezona zinto zibaluleke kakhulu yile. Ukuba luhlobo lwe-capacitive, ndingathi kufuneka lunyanzelwe ngumthetho, J Ngokubukhulu, ndiqikelela ukuba ukufumana isibonelelo sokwenyani kwezi ndawo kufuneka ubuncinci zibe zii-intshi ze-9-10.
Kuba? Olona hlobo lusetyenziswayo luya kunikwa kwithebhulethi kukulawula umxholo wemultimedia, nokuba yeyividiyo, imifanekiso, ukukhangela kwiwebhu kunye nevidiyo ezihambelana nazo kunye nokunye okunjalo. Ndicinga ukuba sonke siya kuvuma ukuba oku kungcono kwenziwe kwiscreen esikhulu kunesincinci. Isisombululo esincinci seepikseli ezingama-1024 × 600 kunye nohlobo lweLCD iya kuba sisiqalo.
Enye yeenzuzo zamacwecwe kukuhamba kwazo kwaye ngaphakathi kolu mgangatho kufuneka sahlule iinkalo ezimbini, ubunzima kunye nokuzimela. Isiphelo sendlela ekujongwe ukuba ngokomgaqo senzelwe ukuxhaswa ezandleni akufuneki sibenobunzima obugqithisileyo. Ukunika umzekelo wereferensi, i-iPad ngaphandle koqhagamshelo lwe-3G inobunzima be-680 gram kunye nemodeli ene-730 gram.
Ukuba nobunzima besalathiso ndiyakuxelela ukuba xa ubambe i-iPad okwethutyana iba nzima, ke ukuba Ithebhulethi ye-Android ukuba ukhangela ubunzima obungaphezulu kwe-730 gram, sele uyazi ukuba ngaphantsi kweyure iyakuthatha.
Ibhetri njengoko sele sichazile yenye indawo ekufuneka uyiqwalasele malunga nokuhamba, ukuba nebhetri ekuvumela ukuba wenze ubuncinci iiyure ezi-6 okanye ezisi-7 zomsebenzi ndicinga ukuba kufuneka ubuncinci ekukhetheni imodeli okanye hayi.
Ukuza kuthi ga ngoku ndiza kuqwalasela ezona mpawu zibalulekileyo ekufuneka zithathelwe ingqalelo xa ukhetha ifayile ye- Ithebhulethi ye-AndroidEwe, ezinye iinkcukacha zibalulekile kodwa ndingazishiya kwindawo yesibini. Kutheni okwesibini? Masithi ukuza kuthi ga ngoku siqwalasele isiseko sesixhobo kwaye okushiyekileyo zizongezo ekungezizo zonke esinokuzifuna okanye asinazo zonke iimfuno ezifanayo.
Phakathi kwezi zinto zongeziweyo ndibeka zombini iziphumo ezahlukeneyo ze-USB kunye ne-HDMI, kunye nokudityaniswa kweGPS, uqhagamshelo lwe-3G, njl. uqhagamshelo lwedatha kwi-Smartphone yam kunye namaxesha ekufuneka ndisebenzise uqhagamshelo lolu hlobo kwithebhulethi, ndiya kuyenza imo yokubhala. Ngokuqinisekileyo kuya kubakho abantu abangenalo olu nxibelelwano kwiselfowuni yabo okanye abakhetha abo banalo olu nxibelelwano ngenxa yokusetyenziswa kwalo okuqhubekayo. Ngesi sizathu waphawula ukuba ezi mpawu zamacwecwe lukhetho lomntu kwaye azibalulekanga kangako.
Lo mbandela ndicinga ukuba ubaluleke kakhulu kwaye i-Android yiyo yonke into, njengoko sisazi kakuhle ayizizo zonke iinguqulelo ze-Android ezifanayo. Sele siphawule kaninzi indlela uGoogle athe ngayo IFroyo okanye i-Android 2.2 ayisiyiyo inguqulelo efanelekileyo yenkqubo yezixhobo zohlobo lwethebhulethi. Ukuba sithenga ithebhulethi ngoku, into yokuqala endiza kuyenza kukuqinisekisa ukuba le thebhulethi iyakufumana nyusela kwi-Gingerbread kwaye ngokuqinisekileyo kwangoko kungcono, ukuba ayisiyiyo loo nto, kwakhutshwa ngaphandle ngokuthe ngqo. Sele siyazi ukuba intengiso izaliswe ngamanzi namhlanje "ziiipilisi ze-Android", ucinga ukuba zingaphi kuzo ngokuqinisekileyo eziya kufumana i-Android 2.3 okanye i-Android 3.0? Ndicinga ukuba ngeminwe yesandla esinye ndingasindisa.
Elinye inqaku elifanelekileyo malunga nesoftware kukwazi ukuba inayo Iapps zikagoogle ifakiwe okanye ubuncinci kwiNtengiso ye-Android nangona kunokwenzeka ukuba ithwala iMakethi iya kuyiphatha yonke. Nangona i-Android ivumela ukufakwa kwezicelo phantse naphi na kwaye akukho mfuneko yokuba ube neNtengiso ye-Android, kule Marike "yaseburhulumenteni" kukho elona nani likhulu lezicelo ezikhoyo kwaye sinethuba lokufikelela kwiNtengiso iphela.
Ezinye iinkampani ezinje ngeArchos okanye iToshiba zineNtengiso yazo kwaye azifaki kuGoogle, kwezi sinokuba nenani elikhulu lezicelo zokufaka kwiipilisi kodwa singasondeli kwinani esinalo kwiMarike ye-Android.
Ukuba isixhobo esisibonileyo sihlangabezana neemfuno zethu kwaye ngexabiso lelona lisifanele kodwa lingenayo iMarike ye-Android, kukujonga ukuba ayinakufakelwa na ngokungafanelekanga.
Ngaba unokucinga ngenye indlela onokuyithatha njengebalulekileyo xa uthenga ithebhulethi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » Amanqaku okuqwalaselwa ukuba uza kuthenga ithebhulethi ye-Android
ukuba uyafuna uku sitsho
Inqaku elilungileyo. Kwimeko yam, yenza ukuba izinto zicace gca. Kude kube ngoku, bendinomdla kwiArchos 101, ngokunxulumene nomgangatho / ixabiso, kodwa kuyinyani ukuba kwinqanaba leprosesa ayizukufumana ikamva okanye uhlaziyo olugqithisileyo ... Ayisiyo ukuba ndiza kubuza Ithebhulethi yayo nayiphi na into egqithileyo (iincwadi ze-e, iividiyo, i-intanethi iya kuba yeyona nto iphambili) ipilisi.
Ndikhumbula isibini "seengcebiso ngokuthe ngqo", ngokuqinisekileyo ukuvula umlomo wam, hehe.
Ngendlela, iwebhusayithi ebalaseleyo kunye namanqaku agqwesileyo. Konke okugqibelele.
Phendula kwi sihayqueirseva
Enkosi, xa ndizama ezinye ndizakucebisa 🙂
Ndibuyisele iToshiba FOLIO 100 kuba ayisebenzi kakuhle. Izicelo azifanelekanga kwaye akukho nto ngeFlash player eboniswayo. Ndiza kulinda ukuze ndibone oko kuphumayo kuba andifuni ukuphela ezandleni "ze-apula." Ukubulisa
Phendula ku fdo5519
Andivumelani nobuncinci bescreen se-9-10 intshi, ndicinga ngethala lomthala nge-intshi ezi-7 nangaphantsi kwama-400 amagremu lolona khetho lufanelekileyo ukuba bekungekho kuba kuyabiza.
Kuyabiza ewe kunjalo, ewe. 🙂
Utsho malunga nohlaziyo lwe-2.3 okanye lwe-3.0 kodwa singaqinisekisa njani ukuba iinkampani ziya kuhlaziya kwinkqubo elandelayo yokusebenza? kuba ukuba ndiye nakweyiphi na ivenkile ukuyokuyithenga, baya kuthi bandixelele ewe ukuba bandithengisele ithebhulethi kodwa andinasiqinisekiso sokuba inkampani iya kuyenza.
Oko akunakuqinisekiswa nangubani na, kufuneka siyithembe into abasixelela yona, yingxaki
Inqaku elilungileyo, ndivuma ngokupheleleyo uninzi lweengcebiso.
Okwangoku, ngokungabikho kokwazi izihloko ezithambileyo kwinto endiyibonileyo ukuza kuthi ga ngoku, ndibone i-Adam Notion Ink (ngaphandle kwe-3G, ethi, njengawe, ndicinge ukuba ayimfuneko kwesi sixhobo)
Kwelinye icala andivumelani noAndy Garcia kumba we-Galaxy tab, ngokoluvo lwam ayisiyi-smartphone okanye itafile .. ifana ne-hybrid phakathi kwezi zimbini (ndinyanzelisa… ngokoluvo lwam).
Yeyiphi onayo kwiSikhundla # 1?
Ngaba ucinga ukuba kufanelekile ukulinda iinyanga ezimbalwa ukuze isizukulwana sesi-2 siphume okanye silinde de siphume neGingerbread?
Ngokomgaqo u-Adam, ujongeka ulungile kodwa kuya kufuneka silinde ukubona ukusebenza kwawo okwenyani. Kwakhona i-adventvega ayimbi nayo. Kuya kufuneka sizame
Kwaye ngubani owathi i-Android 3.0 izakuba yeyetafile yePc? Ngokwazi kwam, yonke into kukuthelekelela, uGoogle akaqinisekisanga kwanto ...
9 okanye 10 intshi ubukhulu? Ngokuchasene. I-7 ″ iyaphatheka kwaye ayinzima kangako, kwaye andicingi ukuba ihlala isiqingatha seselfowuni kunye nesiqingatha sethebhulethi… ndiyayibona ikhululekile.
Kwaye, ngokumalunga nokusetyenziswa kweGoogle, ewe, ndiyavuma, kodwa amaxesha amaninzi isonjululwa, ngokulula ngakumbi (NjengakwiArchos) okanye kunzima ngakumbi (NjengakwiZt-180), kunye nezinye iirom (Njengoko kucingelwa ukuba kuyakwenzeka ngeToshiba).
Ulwazi lwakho luhle kakhulu!
IAlchemy, zingaphi indibaniselwano ocinga ukuba uyazi? -Ubungozi, umdlalo olikhoboka kakhulu
EMadrid naseJaén, kufunwa iiteksi kunye noTaksee